अब उनीहरुले के गर्लान, कसरी अगाडि बढ्लान्, अनि के नाम बाट आफ्नो प्रकाशन सुरू गर्लान भनेर प्रतिक्षारत नेपालीहरुले चाँडै नै, बजारमा “न्हूँ नेपाल” नामक नेपाली दैनिक पत्रिका पढ्न पाउने भएकाछन् । कान्तिपुर पब्लिकेशनबाट आफ्नो शेयर कैलाश सिरोहियालाई बेचेर बाहिरिएको ज्ञावाली समूहले दशैँ पछि लगत्तै आफ्नो पत्रिकाको प्रकाशन गर्ने भएको छ । केही समय काठमाडौँ केन्द्रित भएर परिक्षण गर्ने जनाइएको ज्ञावाली समूहले “न्हूँ गणतान्त्रिक मिडिया” मार्फत “न्हूँ नेपाल” नामक नेपाली दैनिक र एक अंग्रेजी पत्रिका प्रकाशन गर्ने भएको छ । “न्हूँ” नेवारी शब्द हो, जसको अर्थ “नयाँ” भन्ने हुन्छ ।
पत्रिका को प्रकाशन दशैँ पछि देखि हुने भन्ने जानकारी पाइएको, न्हूँ गणतान्त्रिक मिडिया ले बागडोल, ललितपुरमा करिब २५ रोपनि जग्गा लिएर त्यहीँ बाट आफ्नो प्रकाशन सुरु गर्ने भएको छ, तथापी युनाइटेड वी ब्लगले न्हूँ गणतान्त्रिक मिडिया को कार्यालय सुन्धारामा रहने जनाएको छ । न्हूँ नेपाल दैनिक को सम्पादक मा नारायण वाग्ले नियुक्त भैइसकेकाछन् । उनी चर्चित उपन्यास पल्पसा क्याफेका लेखक पनि हुन् ।
हिजोआज कैलाश सिरोहिया, माओवादीको पछि लागेका छन् । ज्ञावाली समूहले पहिले कान्तिपुर लिने निश्चित भैसकेको भएपनि, माओवादीलाई उपयोग गरेर सिरोहियाले कान्तिपुर लिन सफल भए तर अहिले माओवादिले नै सिरोहियालाई उपयोग गरिरहेको छ । स्रोत भन्छ, कान्तिपुर को नयाँ सम्पादक मा युवराज घिमिरेलाई नियुक्ति गरिसकिएको थियो तथापी, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड को दबाब मा सिरोहियाले सुधिर शर्मालाई कान्तिपुरको नयाँ सम्पादक पदमा ल्याए । सुधिर शर्मा माओवादी समर्थक मानिन्छन् । त्यसैले देख्न सक्छौँ, हिजोआज कान्तिपुर माओवादी पट्टि ढल्केको छ, साथै कान्तिपुरमा पाठकलाई दिइएको पाठकमञ्च पनि आधा कटौति गरिएको छ । पाठकमञ्चलाई पहिले एक पेज छुट्याइएको भएपनि, अहिले कान्तिपुरमा पाठकमञ्च लाई आधा पेज छुट्याइएको छ ।
अन्तिम समयमा आएर कान्तिपुरले आफ्नो निर्णय फेरेको मा सायद युवराज घिमिरे असन्तुष्ट भएका छन् । युवराज घिमिरे व्दारा सम्पादित साप्ताहिक पत्रिका “समय” को केही पहिले निस्किएको अंकमा विनोदराज ज्ञावालीको अन्तर्वार्ता छापेर, घिमिरे ले सिरोहियालाई केही प्रतिक्रिया देखाउन खोजेका हुन् कि भन्ने भान पनि हुन्छ । अन्तर्वार्ता मा कान्तिपुर छाड्नुको कारण ज्ञावाली ले प्रष्ट नपारेपनि, यो व्यवसाय भन्ने चिज चाँहि एक्लैले गर्नुपर्छ भन्ने आभाष भएर कान्तिपुर सिरोहियालाई छाडेर आफू बाहिरिएको बताएका थिए । कान्तिपुरमा छँदा आफूले जहिले पनि जुनसुकै निर्णयलाई पनि चुपचाप समर्थन गरेको बताउने ज्ञावालीले, “समय” ले लिएको अन्तर्वार्ता जीवन कै आफ्नो पहिलो अन्तर्वार्ता, हो भनेका छन् । यस अन्तर्वार्ताका कारण युवराज घिमिरे को समर्थन ज्ञावालीलाई छ कि भन्ने भान पनि हुन्छ , भित्रि कुरा जे भएपनि ।
कान्तिपुर बाट बाहिरिएका गुणराज लुईटेल, प्रतिक प्रधान, अमित ढकाल, डि के जैसी आदि पनि “न्हूँ गणतान्त्रिक मिडिया” मा समाहित भएका छन् । त्यस्तै प्रसिद्ध कार्टुनिस्ट राजेश केसी, पनि नयाँ मिडिया हाउस मा छिरेका छन्, अनि उनी त्यहाँ पत्रिका को डिजाइन सम्बन्धि काम हेर्ने भएका छन् । अर्को कुरा कान्तीपुर टिभी न्युजरुम का सोहन श्रेष्ठ पनि कान्तिपुरबाट बाहिरिएका छन्, साथै, यी दुवै मिडिया बिच कर्मचारी र पत्रकारलाई आ‍-आफ्नो तर्फमा तान्ने ठूलै प्रयास भैरहेको छ ।
खैर, कुरा जेसुकै होस्, नयाँ नेपाल को नयाँ पत्रिका “न्हूँ नेपाल”लाई हार्दिक शुभकामना, प्रेस स्वतन्त्रता अनि मानवअधिकार प्रति सदैव प्रकाशन सचेत रहनसकोस् ।
eShan August 31, 2008 at 8:17 PM
article le naya nepal ko naya raatnitik chhalbaaji lai prasta paareko chha,
patrakaar haru le aafulai raajnitik ruple neutral (tatastha) bhane pani ego ya bhanaun swartha kai laagi pani neta lai use garne ra neta baata use hune kaam ma taalin rahanchhan bhanne kura yo article ko saar -sandesh ho.
cheers to aakarPOst for this article
उजेली August 31, 2008 at 9:10 PM
कान्तिपुरको धार नै कहाँ रह्यो र अब ! राजेस केसीको कार्टुन पहिलो पृष्ठको शोभा थियो । त्यो नदेख्दा कान्तिपुर पढ्ने इच्छा नै मरेर जान्छ । खैर, पहिलाको कान्तिपुरको जस्तो धार अबको नयाँ पत्रिकामा देख्न पाइयोस् ।
दीपक जडित September 1, 2008 at 1:50 AM
न्हुँ नेपाललाई अझै परिस्कृत रुपमा देख्न पाईयोस ।
Blogger Dai September 1, 2008 at 2:18 AM
Rajesh KC's cartoon will be the main attraction for sure!
Basanta Gautam September 1, 2008 at 6:31 AM
यी सुधीर शर्मा पहिला 'नेपाल'का सम्पादक हुँदापनि नेपाल अलि बढीनै माओवादीतिर ढल्केजस्तो लाग्थ्यो। जसले जे भनेपनि 'कान्तिपुर' दैनिक भने निष्पक्ष र पेशागत थियो। यदि माओवादीले कान्तिपुरभित्र आफ्नो 'सूँड' घुसारेर त्यहाँको फुटलाई मलजल गरेको हो भने स्वतन्त्र प्रेसका भावी दिनहरु सजिला छैनन् भन्ने स्पष्ट छ। माओवादीहरु प्रभावशाली संचार-संस्ताहरुलाई सके दमन गर्ने, नसके अनेक तिकडम गरेर फुटाउने गर्नेछन् यसपछि पनि।
राजेश के सीले पक्कै पनि धेरै ग्राहक तान्नेछन् 'न्हूँ नेपाल'का लागि। अनि अर्को कुरो, यो कान्तिपुरको नयाँ ब्यबश्थापनले पाठक-मञ्चलाई गिँडेको पनि पटक्कै चित्त बुझेको छैन मलाई। पाठक-मञ्च देशका समस्याहरुको बारेमा वहस गर्ने एउटा लोकप्रिय डबली बनिसकेको थियो। यसलाई गिँडेर के पाउँछु भन्ठानेका होलान्?
'न्हूँ नेपाल' एउटा निष्पक्ष र लोकप्रिय राष्ट्रिय पत्रिकाको रुपमा अगाडि बढ्न सकोस् भन्ने शुभकामना!
दिलीप आचार्य September 1, 2008 at 10:03 AM
मैले बुझेको सोझो कुरा के हो भने राजनैतिक दलले पत्रिका पत्रिका चलाउन त सक्छ तर बिकाउन सक्दैन । पत्रिका बिकाउन र लोकप्रिय बनाउन पाठक कै भर पर्नु पर्छ।
कान्तिपुर जस्तो पत्रिकाले यसरि पाठक-मञ्चलाई घटाएर र कुनै यौटा दल वा गुटतर्फ झुकाव राखेर चल्दा कालान्तरमा आफैलाई घाटा लाग्ने प्रष्ट छ ।
फुटको स्वागत गर्न त सकिन्न तर जब छुट्टिने कार्य भईसक्यो, म पनि आशा गर्छु 'न्हूँ नेपाल' एउटा निष्पक्ष पत्रिकाको रुपमा अगाडि बढोस।
badri September 1, 2008 at 12:13 PM
जुनसुकै राष्ट्रिय पत्रीकाहरु निष्पक्ष हुनु पर्छ.....
'न्हूँ नेपाल' निष्पक्ष र लोकप्रिय पत्रिकाको रुपमा सफलताको साथ अगाडि बढ्न सकोस् भन्ने शुभकामना!
कैलाश September 1, 2008 at 12:52 PM
'न्हूँ नेपाल' को पाइला राम्ररी टिकोस भन्ने कामना । माथि साथीहरुले भन्नुभएको कुरामा मेरो फुर्ण समर्थन छ । साथमा केही कुरा मात्रै थप्छुः पहिलेको कान्तिपुरले पाठक मञ्चको नाममा पैसा जोगाउँने मेलो पनि त गरेकै थियो । नयाँ लेखकहरुले पठाएका लामा लामा लेखहरुलाई पनि पाठक प्रतिक्रियामा छपाउने गरेको थियो । यदि त्यही लेख दृष्टिकोण पातोमा छापिएमा पारिश्रमिक दिनुपर्ने हुन्थ्यो । अनि अर्को कुरा पाठक मञ्चको प्रयोग पाठकवर्गले कम, डेस्क र पब्लिकेशनभित्रैबाट बढी उपयोग हुने कुरा पनि बारम्बार आउँने गरेको थियो । कति साँचो हो त्यो चाहि मैले यहाँ प्रष्ट पार्न सकिन है । यदि साँचो हो भने आधा स्पेस घटाएर पूर्ण रुपमा पाठकहरुकै लागि राखेको हो भने राम्रै पो हो कि।